NEWS – democracy for burma
UPDATE: လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက် [ရန်ကုန် ၁၁-၂-၂၀၁၅] မွန်ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီး ၏ အတားအစီးများကို ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်း အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီ . . . .။ (11 Feb 2015)4:45 Pm cr. Ko Thu Ko Kyaw Khant မြေလတ်ကျောင်းသားတွေကို ဘီးလင်းမြို့နယ် သို့ လာပို့ပေးတဲ့ Express ကား ကို ပုဒ်မ ၂၂ နဲ့တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်ပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်၊၊ွှ မြေလတ်ကျောင်းသားတွေကို လာပို့တဲ့ ရွှေစင်စကြာင်္ကားကို ဘီလင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊အခု တရားရုံးသို့ ပို့မည်ဟု သိရကြောင်း ဒလ -ရန်ကုန် ကားဇတ် ပေါ်မှာ ၁၁.၂.၂၀၁၅ မော်လမြိုင် ၊ထားဝယ် ဒီမိုကရေစီသပိတ်စစ်ကြောင်း နှင့် သထုံ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပူးပေါင်းကြပါပြီ
On October 30, 2014 October 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
နေမျိုးဇင် ခြေရှုပ်ခဲ့တဲ့ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ အကယ်ချောင်းကျေးရွာက ခင်နှင်းဖြူ(ခ)မိဖြူကို အတည်ပါဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ ဖျက်စီးခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ရှိမှ သူတာဝန်မယူနိုင်တော့ပါဘူးပြောလို့ စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေနဲ့ အဆိပ်သောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ခင်နှင်းဖြူ(ခ) မိဖြူသည် (23-10-2014) ရက်နေ့မနက် ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ အကယ်ချောင်းကျေးရွာနေ ၄င်း၏နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ Continue reading “#ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ဟိုနေ့က မြို့တော်ခန်းမအရှေ့ ပွဲကြောင့် အပေါင်းပါများ #အမည်တပ်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၈ #တမှုထဲ ရှိတယ် ထင်နေတာ။” →
#စည်းလုံး ညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ
#နမ့်ဆန်တွင် #TNLA #တပ်မတော်နှင့် တပ်မ (၇၇)တိုက်ပွဲဖြစ် မြန်မာတပ်မှ အထိနာ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
On October 22, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
နမ့်ဆန်တွင် TNLA တပ်မတော်နှင့် တပ်မ (၇၇)တိုက်ပွဲဖြစ် မြန်မာတပ်မှ အထိနာ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
နမ့်ဆန်မြို့အနီး နမ်းခေးရွာတွင် ယနေ့ နံနက် ၀၅း၀၀ မှ ၀၅း၃၀ အထိ TNLA တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ၊ တပ်ရင်း အမှတ် (၂၅၆)နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ (၇၇)လက်အောက်ခံ ခမရ (၁၀၆)တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာ
TNLA မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော RPG ကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်မှ ၂ ဦး ကျဆုံးပြီး ၂ ဦးဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း ဒဏ်ရာရ မြန်မာစစ်သားကို စစ်တပ်စေခိုင်းမှုအရ နမ့်ခေးရွာမှ ထမ်းခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းနှင့် ၉-နာရီကျော်အထိ နမ့်ဆန်ဆေးရုံကို မရောက်ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။